ဘဏ်အကောင့်နံပါတ် ပြောင်းလဲလိုခြင်း – Driver
သင့်ရဲ့ဘဏ်အကောင့်ပြောင်းလဲရန်အတွက် သင်ပြောင်းလဲမည့် ဘဏ်အကောင့်မှာ သင်၏ အမည်နှင့်ဖွင့်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ တခြားသူနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော နှစ်ဦးအသုံးပြုသည့်အကောင့်မဖြစ်ရပါ။ အကယ်၍ သင်၏ဘဏ်အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲလိုပါက ထိုဘဏ်နှင့်ပါတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တင်ပြပေးရပါမယ်။
မှတ်ပုံတင်မှ ဂဏန်း ၆ လုံး
တို့ဖြစ်ပြီး အောက်ပါပုံစံများတွင် ဖြည့်သွင်းပေးပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
1. Grab ကိုပေးထားသော မိမ်၏ ဘဏ်အကောင့်မှာ မိမိတစ်ဦးတည်းပိုင်ဆိုင်သောအကောင့်သာဖြစ်ပြီး Grab ရဲ့ Cash Wallet ကိုလည်း မိမိတစ်ဦးတည်းသာအသုံးပြုကြောင်းအာမခံပါသည်။
2. ဤဘဏ်အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ငွေလွှဲပြောင်းမှုများသည် Grab နှင့်ပါတ်သက်သော ငွေလွှဲပြောင်းမှုများပြုလုပ်ရာတွင် မိမိတစ်ဦးတည်းသာ လုပ်ဆောင်ကြောင်းတာဝန်ယူပါသည်။
3. အကယ်၍ မိမိအနေနှင့် ပူးတွဲဘဏ်အကောင့်ကို အသုံးပြုပါက မိမိ၏ငွေလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပါတ်သက်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို မိမိနှင့်အတူပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သောသူ သိရှိကြောင်းအာမခံပါသည်။
GrabFood သယ်ပို့ပေးခြင်း အခက်အခဲနှင့်ပါတ်သက်၍ တင်ပြလိုခြင်း